ပျိုမေတို့ ကြောက်တဲ့ နွေရာသီမှာ ….. – ADS Myanmar Blog
ပျိုမေတို့ ကြောက်တဲ့ နွေရာသီမှာ …..
“နွေရောက်တော့မယ်ဟေ့ “လို့ အသံကြားတာနဲ့ ပျိုမေ အများစု အလုပ်စရှုပ်ပါပြီ…….. ရာသီဥတုနဲ့လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်မယ့်အဝတ်အစားတွေဝယ်ရတာ….. မိတ်ကပ်၊လိုးရှင်းဝယ်ရတာ စတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ နွေရာသီကို စတင်ဖွင့် လှစ်ကြပါပြီ….. နောက်ပြီး နွေရာသီမှာ မြန်မာတို့ အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီး ကလည်းရှိနေတော့ ကဲကလည်းကဲချင်တယ် ရွှေလိုဥထားတဲ့ အသားအရည်လေးတွေ ထိခိုက်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်တဲ့ ပျိုပျိုမေတွေအတွက် နွေရာသီ အသားအရည်ထိန်းသိမ်းဖို့ နည်းလေးတွေကို ads.com.mm ကနေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်…. တစ်ချို့ အချက်တွေက ပျိုမေတွေ သိပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပါ…. ဒါပေမယ့်လည်း နှစ်ထပ်ရှိတော့ မှတ်မိတာပေါ့နော်…….
(၂) နေရောင်ခြည် ကာကွယ်တဲ့ ခရင်မ် ( Sun cream ) ကို အပြင်မထွက်ခင် နာရီဝက်လောက်ကြိုလိမ်းပါ….. အိပ်ထဲမှာလဲ ဆောင်ထားပါ။
(၃) နေကာမျက်မှန်တပ်ပါ….. အသားရည်ကိုထိန်းသိမ်းသလို ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကို လည်းနေရောင်ခြည် ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်သင့်ပါတယ်…… နေကာမျက်မှန်လေးကြောင့် ကိုယ့်မျက်လုံးလေးတွေအေးနေမယ့်အပြင် စတိုင် လည်း ကျစေမှာပါ။
(၄) လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ပါ…… ပူတယ်အိုက်တယ်ဆိုပြီး အတိုအပြတ်တွေ သိပ်မဝတ်ပါနဲ့….. နေလောင်ဒဏ်ကို ကာကွယ် နိုင်မယ့် ပွပွအိအိ လေးတွေ ဝတ်ပေးပါ…… အခုဆိုရင် ခပ်ပွပွ ဒီဇိုင်းလေးတွေ ……လွင့်လွင့် ဝဲဝဲ ဂါဝန်လေးတွေ ပြန်ပြီး ခေတ်စားလားတော့ အတော်ပဲပေါ့…..
(၅) Toner သုံးပါ……ချွေးပေါက်လေးတွေကျဉ်းပြီး အသားအရည်အေးမြနေစေဖို့ Toner ကောင်းကောင်းသုံးပေးပါ….
(၆) ရေဓာတ်များများပါတဲ့ Moisturizer သုံးပါ……..နွေရာသီမှာဆိုရင် အဆီပြန်တာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်…. ဒါကြောင့် ကိုသုံးနေကျ Moisturizer ဟာ Oily ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ရေဓာတ်ပါတာလေးပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။
(၇) အသီးဖျော်ရည်များများသောက်ပါ……ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးတဲ့အပြင် အသားအရည်လည်းလှ အဆီလည်းကျ လန်းဆန်းမှုလည်းရ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ….. ဘယ်သွားသွား အသီးဖျော်ရည်လေးကို ဗူးလေးနဲ့ ထည့်သယ် သွားပါနော်….
(၈) Body scrub လုပ်ပါ……. နေလောင်လို့ ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆဲလ် အသေတွေဟာ Body Scrub လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် ဆဲလ် အသစ်တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်စေပြီး အသားအရည်ဆိုပြေစေပါတယ်….
(၉) လေ့ကျင့်ခန်းဆက်လုပ်ပါ…… အပူဒဏ်ကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ မှားယွင်းတဲ့ ဆင်ခြေပါ…. အိမ်ပြင်မှာနေပူရင် အိမ်ထဲမှာ လုပ်ပါ… Gym သွားတယ်ဆိုရင် ချွေးထွက်တာတွေ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ ရေများများသောက်ပါ…. ဓာတ်ဆားရေသောက်ပြီး ဆက်လုပ်ပါ….. ရာသီဥတုပူလို့ဆိုပြီး အဆီနဲ့ weight တက်တာက ရပ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး…….ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ပုံမှန်လုပ်ပါ။
အခုဆိုရင် online မှာကော Social Media မှာပါ ကိုယ့်အိမ်မှာ အလွယ်တကူ အသာအရည်ထိန်းသိမ်းဖို့ Mask လုပ်နည်းလေးတွေ Share လုပ်ထားတာတွေ့တော့ ads.com.mm လည်း Mask လုပ်နည်းလေး(၃) ခုကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်ချင်ပါသေးတယ်…..
(၁) နေလောင်တာတွေ အမြန်ပျောက်ဖို့ဆိုရင်……..ဒိန်ချဉ်ရယ် သံပရာရည်အနည်းငယ် (စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဝက်လောက် ) ရောပြီး လိမ်းပါ…… ခြောက်သွားပြီဆို ရေဆေးလိုက်ပါ….. သံပုရာရည်မှာပါတယ် စစ်ထရစ်ဓာတ်ဟာ နေလောင်တာကို အမြန်ဖယ်ရှားဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းပါ။
(၂) အသားလေးဝင်းနေဖို့ အတွက်ကတော့ ….. သင်္ဘောသီး တစ်စိတ်၊ ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း (၁)ဇွန်း၊ ကြက်ဥ အကာ တို့ကို ရောမွှေပြီး မျက်နှာ ၊ လက်တို့ပေါ်မှာ (၁၅)မိနစ်ခန့် လိမ်းထားပေးပါ….. ပြီးရင်ရေဆေးချလိုက်ပါ…. ဝင်းမွတ်တဲ့ အသားအရည်လေးကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။
(၃ ) နေပူကနေပြန်လာပြီး အသားတွေ ပူစပ်စပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်…… သခွားသီး တစ်ဝက်ရယ် ဒိန်ချဉ်ရယ်ကို blender နဲ့သမအောင်ချေပြီး (၁၅)မိနစ်ခန့် လိမ်ထားလိုက်ပါ …..ရေဆေးချပြီးတဲ့အခါမှာ ထူးခြားတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ချောမွေ့တဲ့ အသားအရည်လေးကို ရရှိနိုင်ပါပြီ။
ပျိုမေတို့အတွက် နွေရာသီနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် အင်္ကျီ အဝတ်အစားနဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း တွေကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ www.ads.com.mm အခမဲ့ ကြော်ငြာ website မှာရှာဖွေ ဝယ်ယူနိုင် တယ်ဆိုတဲအကြောင်းကိုလည်း သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
အားလုံးပဲ ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ အလှပဆုံးနေ့ရက်တွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ….
နှရောသီမှာ ကနွမြာရေးနဲ့ ညီညှတအြောငဘြယလြိုစားသောကမြလဲ???
ရမွေားမွားသောကပြါ………………..နှရောသီမှာခွှေးထှကမြွားတဲ့အတှကြ ခနျဓာကိုယရြဲ့ ဆုံးရှုံးသှားတဲ့ရဓောတတြှကေို ပှနလြညဖြှညြ့တငြးပေးဖို့ရမွေားမွားသောကသြုံးပေးသငြ့ပါတယြ။
ရနှေေးကှမြးသောကပြါ………….. အညာဘကဒြသတှေမှော နှရောသီဆို အရိပကြောငြးတဲ့ သစပြငအြောကမြှာထိုငပြှီး ရနှေေးကှမြးသောကြ ခွှေးထုတတြာဟာ အငမြတနကြောငြးမှနတြဲ့ မှတနြိုးဖှယရြာ အလအေ့ထလေးတစခြုပါ။ ပှီးတော့ ရနှေေးကှမြးသောကြ မှာပါတဲ့
ပွိုမတေို့ ကှောကတြဲ့ နှရောသီ……
နှရေောကတြော့မယဟြေ့ လို့ အသံကှားတာနဲ့ ပွိုမေ အမွားစု အလုပစြရှုပပြါပှီ…….. ရာသီဥတုနဲ့လိုကလြွော ညီထှဖှစေမြယအြဝတအြစားတှဝယေရြတာ….. မိတကြပြ၊လိုးရှငြးဝယရြတာ စတဲ့ ကိဈစတှနေဲ့ နှရောသီကို စတငဖြှငြ့ လှစကြှပါပှီ….. နောကပြှီး နှရောသီမှာ မှနမြာတို့ အမှတတြနိုးတနဖြိုးထားရတဲ့ သငျြကှနပြှဲတောကြှီး ကလညြးရှိနတေော့ ကဲကလညြးကဲခငွတြယြ ရှလေိုဥထားတဲ့ အသားအရညလြေးတှေ ထိခိုကမြှာကိုလညြးစိုးရိမတြဲ့ ပွိုပွိုမတှအေတှေကြ နှရောသီ အသားအရညထြိနြးသိမြးဖို့ နညြးလေးတှကေို ads.com.mm ကနေ ပှောပှပေးခငွပြါတယြ…. တစခြွို့ အခကွတြှကေ ပွိုမတှေေ သိပှီးသားဖှစကြောငြးဖှစနြမှောပါ…. ဒါပမယြေ့လညြး နှစထြပရြှိတော့ မှတမြိတာပေါ့နြော…….
(၂) နရေောငခြှညြ ကာကှယတြဲ့ ခရငမြ ( Sun cream ) ကို အပှငမြထှကခြငြ နာရီဝကလြောကကြှိုလိမြးပါ….. အိပထြဲမှာလဲ ဆောငထြားပါ။
(၃) နကောမကွမြှနတြပပြါ….. အသားရညကြိုထိနြးသိမြးသလို ကိုယြ့ရဲ့မကွလြုံးလေးတှကေို လညြးနရေောငခြှညြ ဒဏကြနေ ကာကှယသြငြ့ပါတယြ…… နကောမကွမြှနလြေးကှောငြ့ ကိုယြ့မကွလြုံးလေးတှအေေးနမယြေ့အပှငြ စတိုငြ လညြး ကစွမှောပါ။
(၄) လုံလုံခှုံခှုံဝတပြါ…… ပူတယအြိုကတြယဆြိုပှီး အတိုအပှတတြှေ သိပမြဝတပြါနဲ့….. နလေောငဒြဏကြို ကာကှယြ နိုငမြယြ့ ပှပှအိအိ လေးတှေ ဝတပြေးပါ…… အခုဆိုရငြ ခပပြှပှ ဒီဇိုငြးလေးတှေ ……လှငြ့လှငြ့ ဝဲဝဲ ဂါဝနလြေးတှေ ပှနပြှီး ခတစြေားလားတော့ အတောပြဲပေါ့…..
(၅) Tonor သုံးပါ……ခွှေးပေါကလြေးတှကဉြွေးပှီး အသားအရညအြေးမှနစဖေေို့ Toner ကောငြးကောငြးသုံးပေးပါ….
(၆) ရဓောတမြွားမွားပါတဲ့ Moisturizer သုံးပါ……..နှရောသီမှာဆိုရငြ အဆီပှနတြာ ပိုဖှစတြတပြါတယြ…. ဒါကှောငြ့ ကိုသုံးနကွေ Moisturizer ဟာ Oily ဖှစတြယဆြိုရငြ ရဓောတပြါတာလေးပှောငြးသုံးကှညြ့ပါ။
(၇) အသီးဖွောရြညမြွားမွားသောကပြါ……ရဓောတဖြှညြ့တငြးပေးတဲ့အပှငြ အသားအရညလြညြးလှ အဆီလညြးကွ လနြးဆနြးမှုလညြးရ ဘယလြောကကြောငြးလဲ….. ဘယသြှားသှား အသီးဖွောရြညလြေးကို ဗူးလေးနဲ့ ထညြ့သယြ သှားပါနြော….
(၈) Body scrub လုပပြါ……. နလေောငလြို့ ပကွစြီးသှားတဲ့ ဆဲလြ အသတှဟေော Body Scrub လုပလြိုကတြဲ့အတှကြ ဆဲလြ အသစတြစဖြနပြှနဖြှစစြပှေီး အသားအရညဆြိုပှစပေေါတယြ….
(၉) လကေ့ငွ့ခြနြးဆကလြုပပြါ…… အပူဒဏကြှောငြ့ လကေ့ငွ့ခြနြးမလုပနြိုငဘြူး ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ မှားယှငြးတဲ့ ဆငခြှပေါ…. အိမပြှငမြှာနပေူရငြ အိမထြဲမှာ လုပပြါ… Gym သှားတယဆြိုရငြ ခွှေးထှကတြာတှေ ပှနလြညဖြှညြ့တငြးဖို့ ရမွေားမွားသောကပြါ…. ဓာတဆြားရသေောကပြှီး ဆကလြုပပြါ….. ရာသီဥတုပူလို့ဆိုပှီး အဆီနဲ့ weight တကတြာက ရပသြှားမှာ မဟုတပြါဘူး…….ဒါကှောငြ့ ခနျဓာကိုယကြို ထိနြးဖို့အတှကြ လကေ့ငွ့ခြနြးကတော့ ပုံမှနလြုပပြါ။
အခုဆိုရငြ online မှာကော Social Media မှာပါ ကိုယြ့အိမမြှာ အလှယတြကူ အသာအရညထြိနြးသိမြးဖို့ Mask လုပနြညြးလေးတှေ Share လုပထြားတာတှတေ့ော့ ads.com.mm လညြး Mask လုပနြညြးလေး(၃) ခုကို လကဆြောငပြေးခငွပြါတယြ…..
(၁) နလေောငတြာတှေ အမှနပြွောကဖြို့ဆိုရငြ……..ဒိနခြဉွရြယြ သံပရာရညအြနညြးငယြ (စားပှဲတငဇြှနြး တစဝြကလြောကြ ) ရောပှီး လိမြးပါ…… ခှောကသြှားပှီဆို ရဆေေးလိုကပြါ….. သံပုရာရညမြှာပါတယြ စစထြရစဓြာတဟြာ နလေောငတြာကို အမှနဖြယရြှားဖို့အတှကြ အကောငြးဆုံးနညြးပါ။
(၂) အသားလေးဝငြးနဖေို့ အတှကကြတော့ ….. သငျြဘောသီး တစစြိတြ၊ ပွားရညြ စားပှဲတငဇြှနြး (၁)ဇှနြး၊ ကှကြဥ အကာ တို့ကို ရောမှပှေီး မကွနြှာ ၊ လကတြို့ပေါမြှာ (၁၅)မိနစခြနြ့ လိမြးထားပေးပါ….. ပှီးရငရြဆေေးခလွိုကပြါ…. ဝငြးမှတတြဲ့ အသားအရညလြေးကို ရရှိပါလိမြ့မယြ။
(၃ ) နပေူကနပှနေလြာပှီး အသားတှေ ပူစပစြပဖြှစနြတယေဆြိုရငြ…… သခှားသီး တစဝြကရြယြ ဒိနခြဉွရြယကြို blender နဲ့သမအောငခြွပှေီး (၁၅)မိနစခြနြ့ လိမထြားလိုကပြါ …..ရဆေေးခပွှီးတဲ့အခါမှာ ထူးခှားတဲ့ ခံစားခကွနြဲ့ ခွောမှတေဲ့ အသားအရညလြေးကို ရရှိနိုငပြါပှီ။
ပွိုမတေို့အတှကြ နှရောသီနဲ့လိုကဖြကမြယြ့ အငျြကွီ အဝတအြစားနဲ့ အလှအပဆိုငရြာ အသုံးအဆောငပြဈစညြး တှကေို ဝယယြူခငွတြယဆြိုရငတြော့ http://www.ads.com.mm အခမဲ့ ကှောငြှာ website မှာရှာဖှေ ဝယယြူနိုငြ တယဆြိုတဲအကှောငြးကိုလညြး သတငြးပေးလိုကပြါတယနြော….
အာလုံးပဲ ပူပှငြးတဲ့နှရောသီမှာ အလှပဆုံးနရေ့ကတြှေ ပိုငဆြိုငနြိုငကြှပါစေ….
Author hsulattPosted on February 22, 2016 February 22, 2016 Categories Lifestyle, OtherTags ပျိုမေတို့ ကြောက်တဲ့ နွေရာသီမှာ .....
Previous Previous post: ရုံးတွင်း ပဋိပက္ခ တွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ….
Next Next post: Facebook စွဲလမ်းမှုကို ရပ်တန့်နိုင်ဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းသုံးသွယ်